दैनिक ३० करोड आक्रमणबाट यसरी जोगिन्छ 'अलिपे', नेपालले पनि सिक्ने कि ? - Aarthiknews
दैनिक ३० करोड आक्रमणबाट यसरी जोगिन्छ 'अलिपे', नेपालले पनि सिक्ने कि ?
काठमाडौँ । पछिल्ला केही महिनामा एकपछि अर्को गर्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भएको साइबर हमला र ह्याकिंग आम नेपालीको टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । बैंकरहरु आफ्नो बैंक प्रति ग्राहकको विश्वास टुट्ने होकी भन्ने चिन्तामा छन् भने कारोबारीहरु कतै गडबडी भएर आफ्नो जीवनभरको कमाइ त लुटिने होइन भन्दै त्रसित बनेका छन् ।
बैंकका अलावा अन्य धेरै बचत तथा भुक्तानीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी र मोबाइल एप समेत नेपालमा चलिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर संचालित यस्ता संस्थाको बिश्वासनियता र कारोबारको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि पछिल्ला घटनाहरुले प्रसस्त प्रश्न उठेका छन् । तिनीहरुको प्रविधि कतिको आधुनिक र बिभिन्न साइबर आक्रमणसंग जुध्नसक्ने खालको हो भन्ने जिज्ञासा अहिले आम ग्राहकहरुको रहेको छ ।
नेपालमा अहिले फोन पे, आइएमई पे, प्रभु पे, सेल पे, खल्ती, र्इ–सेवा जस्ता मोबाइल एपयुक्त कम्पनीले डिजिटल कारोबार गरिरहेका छन् । स्मार्ट कार्ड नामक अर्को कम्पनी त्यस्तै सेवा शुरु गर्ने तयारीमा छ । जसले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि प्राप्त गरिसकेको छ । तथापी, सुरक्षा चुनौतीबारेको चिन्ता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
यस्तो अवस्थामा विश्वका ठूला डिजिटल पेमेन्ट र र्र्इ–कमर्श साइटहरुले आफुलाई कसरी सुरक्षित राखेका छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । उनीहरु कस्ता आक्रमणसंग जुधिरहेका छन् र आफुलाई कसरी विश्वासिलो र भरोसायुक्त राखिरहेका छन् भन्ने बिषय रोचक हुनसक्छ ।
विश्वको प्रमुख र्इ–कमर्श नेटवर्क अलिबाबाले अलिपे मार्फत दैनिक ५० अर्ब डलरको कारोबार गर्छ । अघिल्लो महिना कम्पनी अध्यक्षबाट अवकाश लिएका अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक ज्याक माले मंगलबार सिंगापुरमा आयोजित फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ सम्मेलनमा अलिबाबाको अलिपेमा हुने साइबर आक्रमणबारे केही रोचक तथ्य सार्वजनिक गरे।
ज्याक माका अनुसार उनको कम्पनीमा दैनिक ३० करोड साइबर आक्रमण हुने गर्छ । तर, अलिपेलाई अहिलेसम्म कुनै पनि ह्याकरले आर्थिक नोक्सानी पुर्याउन सकेका छैनन् । विश्वभर अलीपेका १ अर्ब प्रयोगकर्ता छन् । जसले ५० अर्ब डलरको कारोबार दैनिक रुपमा गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसो त यो कम्पनीलाई पनि साइबर आक्रमण र ह्याकरले नसताएका होइनन् । तर, आधुनिक प्रविधि र सुरक्षामा दिइएको विशेष ध्यानले गर्दा यो सुरक्षित रहन सफल भएको उनले जानकारी दिए । गएको फेब्रुअरी महिनामा पनि अलिबाबाको र्र्इ–कमर्स साइट ताओबाओका २ करोड युजर अकाउन्ट साइबर आक्रमणको कारण जोखिममा परेका थिए । अलिबाबाका अनुसार उनीहरुले सही समयमा नै खतराको सूचना पाएका कारण कुनै क्षति हुन पाएन ।
ज्याक माले यो सबै सुरक्षाको जस चाहिं मेसिनलाई दिएका छन् । उनका अनुसार यस्ता कुराको अनुसन्धान र सावधानी मानिसले होइन कि मेसिनले गर्नुपर्छ । उनको यो भनाइ हाम्रो सन्दर्भमा किन पनि महत्वपूर्ण छ भने हामीले अहिलेसम्म नेपालमा भएका यस्ता आक्रमणको सूचना मेसिनबाट प्राप्त गरेको होइन । संयोगबस मानिसको नजरमा आएका सूचनाका आधारमा अपराधी पक्राउ परेका छन् । घटना जानकारीमा आएका छन् ।
नेपालमा पनि बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीसंग जुध्न प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । ह्याकर र लुटेराबाट बच्न एटीएम बुथ बाहिर २४सै घण्टा गार्ड राख्ने जस्ता हास्याँस्पद कुरा गर्न छोडेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ( एआई) को प्रयोगमा ध्यान दिने पो हो कि ?